Fanka, Suugaanta, Taariikhda
Markii uu dalka dib ugu soo noqday 1988kii markiiba waxa bilaabmay dagaalladii xoreyneed ee guda-galka ee SNM, ka dib Feysal Cumar Mushteeg wuxu ka mid ahaa fannaaniintii soo baxday markii Hargeysa la soo galay 31kii Meey 1988kii. Waa colkii miyuusigga ee ay SNM dejisay “Camp Abokor”. Sidii ayuu halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ugu jiray ilaa dalka laga xoreeyay, ilaa maalintan uu dhimanayayna dalka wuu deggenaa.
Marka aynu u leexanno noloshiisii qoysnimo Feysal Cumar Mushteeg dhowr jeer ayuu guursaday, in kasta oo aanu wax ubad ah yeelan ilaa inta aan ogahay. Xaasaskiisii waxa ka mid ahayd Khadra Xaaji Cismaan oo Ina Guray ku magac-dheereyd oo uu Muqdisho ku guursaday 1969kii. Naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’ waxa la ii sheegay in ay beri dhaweyd London ku dhimatay. Khadra waxay walaalo ahaayeen Ganacsade Idiris Xaaji Cismaan oo reer Nayroobi ah oo ka mid ah dadkii qaybta libaax ka soo qaatay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee SNM. Kama uu qayb-qaadan oo keliya e’, bal se waa uu u eedoobay oo xadhig, mastaafurin iyo xoolihiisii oo baaba’a ku mutaystay. Ilaahay ha ka abaal-mariyo.
Waxa kale oo aan ka war-qabay in uu ‘Camp Abokor’ markii la soo qaxay ku guursaday gabadh la yidhaahdo Seynab oo aanay in badan is-qabin. Sheekooyinka aan maqlay waxa kale oo ka mid ah in uu mar kale Xamar ku guursaday gabadh reer Muqdisho ah. Aniga oo aan baadhis qoton iyo dhumucba u gelin noloshiisii qoysnimo inta aan ka xansaday waa intaas.
Feysalkii Fannaanka ahaa iyo saamayntiisii Fanka Soomaaliyeed:
Miyaa cid kasta fannaan lagu sheegaa, fannaanimadu se miyay is-qarisaa. Macallimiintii la shaqayn jirtay waxay ka maseyri jireen sidii uu dareenka ardayda iyo dhegahoodaba ugu qabsan jiray heesihii Carabiga (Nashaa’idkii) ahaa ee uu subaxda hore u qaadi jiray. Maxamed Mooge Liibaan ayaa la mid ahaa. Haddii aanay xiskayga ka tirmin kuwa ugu macaanaa waxa ka mid ahaa “Ayuha Nahru la tasiiri” (Webiyahow ha qulqulin).
Si aad u garato in uu qofku yahay fannaan ab iyo isirba leh uma baahnid in aad aragto isaga/iyada oo heesaya/heesaysa. Wejiga marka aad ku dhufato, samayska jidhkiisa iyo saansaankiisa ayaad ka garanaysaa. Feysal Cumar Mushteeg tahan ayaad ka arkaysay in uu yahay nin uu fanku waaxyaha jidhkiisa buulal ka samaystay, haddii uu afka kuu kala qaadana qosol ayaad jaanta wadhaysay.
Wuxu ahaa nin Ilaahay fahmo badan ku mannaystay oo af Soomaaliga ku wadh-wadhay si kale ku garan meysaan e’. Waxa taa ka marag kacaya habka iyo hannaanka soo-jiidashada leh ee uu u curiyay qaybaha uu kaga qayb-galay Qaraamiga, gaar ahaan heestii beer-qaadday ee ‘Subcis’. Waxa intaa u raacay aqoontii la yaabka lahayd ee uu u lahaa hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aad ka dhandhansanayso midhihii uu ku darsaday ‘Qaraamka’ oo ka mid ah kuwa ugu shilis ee loogu hadal-haynta badan yahay.
Intaa waxa u raacay aqoontii dheeraadka ahayd ee uu ka korodhsaday waxbarashadiisii iyo dal-mareennimadiisii oo aad uga muuqatay curintiisii iyo hal-abuurkiisiiba.
Waxaynu kor ku soo sheegnay in uu Feysal Cumar Mushteeg heestiisii ugu horreysay ee ‘Subcis’ u qabtay ama u duubayba Radio Hargeysa sannadkii 1958kii. Waa xilli aan wax badan ka fogeyn xilliyadii ama sannadihii Qaraamku tisqaadayay. Bal arrintan aan daliil u raadinno.
Bishii Jeeniweri 1998kii, waxaan ku wareystay Hargeysa Club, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’ Axmed Cali Haaruun oo loo yaqaannay Dararamle. Su’aal aan weydiiyay oo ahayd goortii ay Cabdillaahi Qarshe is-barteen wuxu iigu jawaabay 1956kii oo uu ka mid noqday Kooxdii ‘Walaalo Hargeysa.’ Waxa kale oo uu ii sheegay maalintaa in uu sannadkaa fanka soo galay heelladii ugu horreysay ee uu qaadayna ay ahayd “Isku-shuban”. Axmed Cali Haaruun wuxu ka mid ahaa da’dii Hargeysa ku dhalatay 1940kii oo walaashay Ruqiya-Caneb oo ay habro-wadaag ahaayeen ayay habeen iyo maalin kala dhasheen. Waxa kale oo is-na la waqti ahaa Cumar Dhuulle Cali oo qudhiisuna fanka ku ballaysimay heelladaa “Isku-shuban” oo laxankeeda uu curiyay Cabdillaahi Qarshe. Waxaan is-leeyahay Axmed Maxamed Good oo Shinbir loo yaqaannay, Maxamed Yuusuf Cabdi, Cismaan Maxamed Cabdikariim iyo fannaaniin badan oo kaleba isla xilliyadaas ayay dhasheen. Waxaan aamminsanahay in uu Maxamed Mooge Liibaan ka yaraa danbeeyay waxoogaa.
Bal hadda aan in yar ku hakanno Maxamed Axmed oo ‘Kuluc’ loo yaqaan. 11/12/2005kii ayaanu gurigayga Hargeysa wada fadhiisannay oo aan waxooga fanka Soomaaliyeed ka wareystay. Maxamed Axmed in kasta oo ay baasaboorka ugu qoran tahay in uu dhashay 1939kii, sidii uu ii sheegay, haddana taariikhda saxda ah ee dhalashadiisu tahay 1942kii. Maxamed Axmed wuxu ii sheegay in ‘Walaalo Hargeysa’ la aasaasay 1954kii.
Sida aan in badan ka maqlay dad looga-qaateen ah, labadii riwaayadood ee ugu horreeyay oo uu iska lahaa Xuseen Aw Faarax oo kala ahaa ‘Isa-seeg’ iyo ‘Cantar iyo Cabla’ waxay ku beegnaayeen 1956kii. Xuseen Aw Faarax Dubbad wuxu dhashay isaguna 1928kii. Haddii uu haddaba Feysal Cumar Mushteeg 1958kii Radio Hargeysa u duubay ‘Subcis’, miyaanay taasi inoo muujinayn in uu sannad iyo lababa ka hor ku jiray hawada fanka oo uu saaxiibbadii la lug iyo laabba ahaa.
Dararamle oo kale ma ay kala fogaan karayn. Fan-wadaag ayay ahaayeen. Isku xaafad ayay ahaayeen oo reer Laba-Nuux ayay ahaayeen. Labadooda hooyo oo kala ahaa Aamina Maxamed Bulxan iyo Faadumo Cabdi Ibraahim saaxiibbo ayay ahaayeen, fannaanimada wiilasha ay dhaleenna waa ay jeclaayeen.
Si aynu u fahamno halka Qaraamku ka soo hinqaday iyo waayihii uu ku dhashay bal aan dib u yar jalleecno qormo aad u dheer oo aan ka qoray Cabdillaahi Qarshe ka dib markii Hargeysa lagu aasay 3/11/1997kii. Inta aan qormadaa ka soo garoocdayna waa tan si aynu isula jaan-qaadno:
Nolosha faneed ee Cabdillaahi Qarshe waxay ka bilaabmaysaa markii uu Cadan ka soo guuray ee uu soo degay Hargeysa. Cabdillaahi Qarshe wuxu yimid Hargeysa beryihii uu dhammaaday dagaalkii dunida ee 2aad. Isla beryahaa waxa unug ahayd Balwadii oo galbeed iyo Boorame ka tisqaadday. Calan-sidayaashii Balwadu waxay ahaayeen Cabdi Deeqsi Warfaa oo loo yaqaannay Cabdi-Sinimoo iyo Qadiija Ciye Dharaar oo loogu wan-qalay kuna caan-baxday beryhii danbe Qadiijo-Balwo.
Cabdillaahi Qarshe, wuxu yimid Hargeysa isaga oo xiise iyo hammadba u hayay fanka gaar ahaanna miyuusigga. Markaa uu Hargeysa yimid Cabdillaahi ilaa heer ayuu ka gaadhay waxbarashadiisii oo aad ayay u adkayd si dalka looga helaa dad heerkiisaa gaadhsiisnaa. Waxa intaa u dheeraa waayo-aragnimadii hodanka ahayd ee uu ka soo kasbaday degaannadii kala duwanaa ee uu ku soo barbaaray oo ay ku noolaayeen bulshooyin dhaqammadoodu kala duwanaayeen. Cabdillaahi Qarshe, waxa kale oo intaa u weheliyay afaf door ah oo uu degaannadaa kala duwanaa ku soo bartay, intaas oo dhammina saamayn laxaad leh ayay ku yeesheen guud ahaanba noloshiisii faneed. Qarshe wuxu ku dhashay dalka Tanzaniya, waxaanu ku soo koray Cadan isga oo dugsiyada la dhigan jiray arday: Carbeed, Hindi iyo qowmiyado kaleba.
“Waxaanu lahaan jirnay hidde iyo dhaqan guun ah oo aad u gaboobay oo noocyo faro badan leh; laakiin ma aynaan lahayn miyuusig lagu tumo. Waxaa se jiray rag iga horreeyay oo damacsanaa in ay miyuusigga qabadsiiyaan. Waxa ka mid ahaa Qaraamigii – innamadii shaadhadhka gubi jiray ee dabka ku ridi jiray marna shaadhadhka jeex-jeexi jiray. Nimankaasi waxay isku deyi jireen in ay gabayga le’ekeysiiyaan heeso Hindiya, waanay u suuroobi weyday.”
Weli waxa inoo socota gaaxdii Cabdillaahi Qarshe iyo sidii uu fanka ku soo galay. Hadda xusuusnaada in Cabdillaahi Qarshe uu ku dhashay Mooshi (Tanzaniya) sannadku markii uu ahaa 1924kii. Isaga oo hadalkiisii sii wata intaa hore wuxu ku kabay:
“Markaa aniga hammadda ah in aan fanka soo dhex galo waxa igu kellifay, Cadan ayaa 1941kii lahaan jirtay Raadyow yar oo Cadan oo keliya laga dhegaysan jiray. Markii hore Idacaddaa yari afka Carabiga ayay ku hadli jirtay, marki xigayna waxa lagu daray af Soomaali iyo af Hindi. Saddexdaa qaybood oo midkiiba saacad badhkeed yahay ayay barnaamajyadu ahaayeen.
Markaa Carabtu miyuusig iyo heeso waa ay lahaayeen. Marka warku ka baxo ayaa heesaha Carabiga ah iyo Hindiga ah la saari jiray. Bal se marka warka af Soomaaligu ka baxo waxa la saari jiray gabayo oo heeso Soomaaliyeed ma jirin oo la saaraa. Markaa ardaydii aanu dugsiga ku wada jirnay meel ‘sentar’ (center) ah ayaanu ka wada dhegaysan jirnay. Ardayda Carbeed iyo kuwa Hindiga ah ayaa nagu qosli jiray oo odhan jiray: ‘Miyeydaan miyuusig lahayn.’ Markaasaan ku odhan jiray: ‘Waanu leenahay e’ waddankayagii ayuu jiraa.’ Markaa aniga hammaddaasaa igu kelliftay in aan fanka soo galo. Haddana ceeb ayay ahaan jirtay in qalabka miyuusigga la tumaa, sidaa darteed ayaan arrintii hoos u yar galay.”
“Anigu markii aan Hargeysa imid waxaan markiiba la kulmay Balwadii oo soo baxday. Markii aan arkay habeenkii ugu horraysay iyada oo Hargeysa laga tumayo iyada oo ka soo baxday Boorame oo uu sharaf ku leeyahay, Alla ha u naxariisto e’ ninkii la odhan jiray Cabdi-Sinimoo ee aan maqlay ayaan aad iyo aad ugu farxay, wixii aan soo urursaday ee jacburka ahaana waan iska tuuray; oo waxaan idhi: ‘Rag baa xilkii kaa furtay.’ Markaa waxaan ka mid noqday dadkii dafka keliya gacanta ku garaaci jiray ee ku heesi jiray. Waxaan waayay cid wax I barta, waayo Carabta iyo Hindida ayaa wax tumi jirtay. Iyaguna waxay is-yidhaahdeen haddii aad kan Soomaaliga wax bartaan hadhow meheraddii tumistu waa ay idin ka wareegaysaa. Laakiin waxaan daba socdaba 1947kii ayaan gacanta hal cod keliya ku fadhiisiyay intii kale afka iyo Carabta oo ii tunta ayay ku ekaayeen.”
Codkii ugu horreeyay ee Cabdillaahi Qarshe sameeyo Kamankana ku tumaa wuxu ahaa hees waddaniya oo uu midhaheeda tiriyay Suudi Xaaji Aadan oo ay ka mid ahaayeen:
“Waxa jira xukun. Codadka si kasta ha loo sameeyo, qofka mu’allifka ah ee sameeyana si kasta ha ka ahaato e’ waa se hadba dadku siduu ka dhigto. Codka ‘Raaxeeye’ oo kale aroortii lama tumi karo, duhurkii lama tumi karo, waxa se la tumi karaa galabtii weliba marka aad loo mirqaansan yahay ilaa habeenkii oo dhan. Wixii intaa ka horreeya dhadhan ma laha. Waa mar hawl lagu jiro codkanina waa mid lagu raaxaystaa. Aroortii waxa la tumi karaa hees-hawleed, hees waddaniya, heeso shaqada lagu tago oo ujeeddada loo ambo-baxayo ku fadhiya. ”
Markaynu eegno tisqaadka iyo hana-qaadka qaraamka waxa inoo caddanaysa in da’dii ka adeegtay ay ahayd intii dhalatay sannadihii ku dhawaa afartanaadkii qarnigii hore. Waa da’dan ta ay Feysal Cumar Mushteeg iyo qayrkii ka joogaan.
Feysal Cumar Mushteeg, ifafaale cusub ayuu ku ahaa fanka Soomaaliyeed. Ifafaalahaas waxa ballaysimay oo bilaabay macallinkii weynaa ee Yuusuf Xaaji Aadan Cilmi Qabille oo saamayntiisa ku lahaa tacliinta, fanka iyo siyaasadda Soomaaliyeedba. Haddii uu Yuusuf Xaaji Aadan sowraca caynkaas ahaa kow u ahaa, Feysal Cumar Mushteegna ka labaad ayuu ahaa. Waxa xigay iyaguna oo aan wax badanba ka danbayn: Maxamed Mooge Liibaan iyo Maxamed Warsame Qaasaalli oo noqday xiddigihii ugu caansanaa ee fanka Soomaaliyeed oo aan ilaa maanta laga xiiso-goyn. Waa amadkii (maxsuulkii) faneed ee ka soo go’ay miidaanka tacliinta.
Siciid Cali Muuse ayaa ii mariyay sheeko yar oo ku saabsan beryo uu Feysal Cumar Mushteeg Dugsiga Dayaxa macallin ugu ahaa. Waa xilli ku sinnaa 1965kii oo ay qiyaastii sannadkii 4aad ee Dugsiga dhexe ku jireen. Xisaabta oo af Ingiriisi lagu baranayo ayuu Feysal u bilaabay. Sabuuradda ayuu ugu qori jiray tirooyin ay ka shaqeeyaan, isaguna inta uu dibadda u baxo ayuu daaqadda furan jiray si uu u weydiiyo hadba in ay dhammeeyeen. Feysal daaqadda agteeda ayuu is-taagi jiray isaga oo daawan jiray doog ka horreeyay. Wuu foodhyi jiray isaga oo hadba hees ku foodhyaya. Carruurtu show xisaabba kuma maqna ee foodhida Feysal ayay dhegta u raaricinayaan. Hadba wuxu weydiiyaa in ay dhammeeyeen. Iyaguna si uu dibadda u sii taagnaado oo fodhida ugu wado, waxay ku odhan jireen: “Weli ma aanu dhammayn.” Arday ayaa maalin is-olloobay oo yidhi: “Waanu dhammaynnay.” Intii kale ayaa ku dgetay oo tidhi: “Maxaad u odhanaysaa waanu dhammaynnay, foodhida ha noo sii wade.” Waa mid ka mid ah sheekooyinkiisii gaaggaabnaa.
Bal hadda aan idiin dareeriyo midhihii uu Feysal Cumar Mushteeg ku lahaa ‘Qaraamiga’ si aad u garataan kaalintii uu ka galay ama kaga jiray guud ahaan fanka Soomaaliyeed. Bal hadda waxaad fiiro gaar ah u yeelataan saamaynta dhabta ah ee uu Feysal Cumar Mushteeg ku lahaa ‘Qaraamiga.’
Mar kale aniga oo u mahad-naqaya Maxamed Maxamuud Cige oo Busi loo yaqaan ayaa Feysal Cumar Mushteeg midhahan qoray, waxaanu fannaankeennii hal-abuurka ahaa ee Feysal yidhi:
“Ishaydaa jeclaatay araggaagoo,
Naftaydaa oggolaatay la jooggaagoo,
Garanba waayay goor aan kuu imid,
Ileys baad ii ahayd wax aan ku arkoo,
Aqooshayoo ooli kari meyside,
Ammaano alliyo is-araggeen,
Illowsho-dhawaan iska ogow,
Inaabtidu ways ilaashan jirtee,
Ax maad odhan oohintaydii,
Allaygu og uurkanaad ka baxdoo,
Alleylkii xalay waaban eleleday,
Allaygu og adiga mooyaane,
Ishaydu ma eegto inan kale,
Alleygu og waad I moogtahayoo,
Ayaankaygu way ambinayaa,
Allaygu og oomatadii ka go’oo,
Afkayga maba galo anfaacigu,
Agtaada insaanba kuma ihiyoo,
Alleylehe I maad abaal-marin,
Ibtilo raagtay lama illoobi karee,
Haddaad ubax tahay mid aad u uroo,
Udgoon badan baad ahaan layd,
Muddaan ubaxyow ku eeganayee,
Hadmaad I anfaci adduunyada,
Udgoon iyo aragba igu deeqdee,
Ayaa ubaxyahow ku iibsada,
Nolosha dadka Soomaaliyeed ubaxu in kasta oo uu jiray oo dhulka ka bixi jiray, haddana sidan loogu heesayaa waa mid ku taxan nolosha magaalada iyo ilbaxnimadii danbe. Macallinnimadiina wax kaga dara.
Suugaanteenni hore ee la xidhiidhay qaab-nololeedkeennii miyiga, ubaxu dhex-roor iyo dhex-taal midnaba uma ahayn. Ubaxu in kasta uu dalka ka bixi jiray haddana qiime la isku ammaano kuma lahayn nolosheennii hore. Ubaxu wuxu suugaanteenna, gaar ahaan heesaheenna soo galay intii ay nolosha magaaladu samaysantay. Waa xilliyadii uu gumeysigu yimid ama aynu xidhiidhka la yeelannay dhaqammadii carbeed ee inagu xeersanaa. Shaki kuma jiro in ubaxaa la isku ammaanayaa u badnaa dadkii ama dhallinyaradii wax baratay oo uu Feysal Cumar Mushteegna ka mid ahaa.
Qurba-jooggii iyo dal-tabyadii kalgacalku ku ladhnaa ayaa Feysal Cumar Mushteeg ka keentay beydkan soo socda oo aanu shaki ku jirin in uu tiriyay intii uu qurbaha ku noolaa, waxaanu yidhi:
“Nafyahay orodoo arligii qaba oo,
Halkii aad ku ogeyd ka soo eeg,”
Waxaan xusuustay maalmihii aanu ku jirnay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran, maalin ka mid ahayd oo aanu la fadhinay fannaankii la quudhi waayay ee Maxamed Mooge Liibaan. Doobtiisii xariirta ahayd iyo danankii kamankiisa ayaanu ku baananaynay nabarradii dal-tabyadu nagu dhigtay. Waa 18/8/1983kii, haddii aanay xusuustaydu I dagayn. Waa hudheelkii ‘Tasfay’ ee dhinaca woqooyi ka xigay faras-magaalada Diri-dhabe iyo Maxamed Mooge Liibaan oo xadantaynaya xadhkihii Kamankiisii “Deddo=gooye” ee uu la dal-maray.
Wuxu ku leexaysanayaa mid ka mid ah codadkii Qaraamiga ugu macaanaa. Waa codkii heesaaga cusub lagu imtixaani jiray ee “Beer-dillaacshe,” oo uu curintiisa lahaa macallinkii weynaa ee miyuusigga Soomaaliyeed ee Cabdillaahi Qarshe.
Maxamed Mooge Liibaan oo luuqdii la fogaatay oo cir iyo dhul dhexdood maraya, ayaa Korneyl Siciid Cali Giir oo goobta fadhiyay beydkaa xagga sare ku yaal warqad ku qoray oo Maxamed Mooge Liibaan ku hor tuuray. Markiiba mid ag fadhiyay oo fahmo badnaa ayaa la booday oo Maxamed Mooge Liibaan hor qabtay, markaasuu noo raaciyay beydadkii xaradhaamada lahaa ee uu noo marinayay. Innaa lillaah! Alla maalintaas beydadkaasi maxay dhul fog damqeen. Qof joogay ayuun baa garan karayay.
Iyo sidii uu Feysal Cumar Mushteeg ereyada u falkin jiray ugana sameyn jiray maanso dareenkaaga taabanaysa oo deddo-ruxaysa maankaaga iyo ibaha kalgacaylku ka godladoba. Bal hadda beydkan la yaabka leh nala eega:
“I deeqdoo aniga ii noqotee,
Anigu adigana ma kuu ahay,”
Waa kan mar kale isaga oo haddana ka hadlaya iyo sida uu beni-aadamku u jilicsan yahay ee ay naftu u hoggaamiso, waxaanu yidhi:
Maalintan ay dhoofayeen tilmaan gaar ah ayay Hargeysa iyo fanka Soomaaliyeedba ku lahayd. Waa maalintii hal-abuurkii caan-baxay ee Xuseen Faarax Dubbad heestii ‘Ammaano’ sagootiska uga dhigay Maryan Xaashi oo ay markaa isku cindanaayeen. Sidaas ayay Maryan oo aan dalka dib ugu soo noqon ula baxday ‘Ammaano’. Hal-ku-dheggii heesta ayaa ahaa:
Noqo kuma Illaawine,”
Sidii aan ka maqlay Feysal wuu ka tegay dalka Masar. Dhowr waddan ayuu soo maray oo u kala dab-qaaday. Suuriya wuu tegay. Sucuudiga in badan ayuu joogay. Ciraaq iyo Baqdaadna waa uu iiga sheekeeyay. Dalka Jarmalka (Kii galbeed) beryo ayuu joogay oo xataa mar waqti kooban uu ku xidhnaa. Feysal Cumar Mushteeg wuxu dalka ku soo laabtay 1967kii, waxaanu dib ugu laabtay shaqadiisii macallinnimada. Intan uu joogay Qurbaha, Sucuudigu ha ugu badnaado e’, suugaan badan oo Qaraamkii ah ayuu tirinayay (Buyuud Dhaanto ah). Waxaynu ka soo qaadan karaynaa:
“Naf yahay orodoo arligii qabo oo,
Halkaad ku ogeyd ka soo eeg,”
Buyuuddii uu ku calaacalay markii uu Sucuudiga joogay waxaynu ka soo qaadan karaynaa:
“Dammaam iyo Khobar ma doonaayoo,
Dariiqa Togbaa I daashadayoo,
Dookhayga dalkan waan la garan waayee,
Aan duulee dayaarad ii doon,”
Habeennadii uu baashaali jiray Qurbaha, Feysal Cumar Mushteeg waxa laga hayaa:
“Habeenba hir baan ka heesi jiree,
Caawana Hilton baan hawaarsaday,”
Maalmihii danbe laxawgii iyo kalgacalkiiba meelo fog ayay la mareen ninkii Feysal ahaa, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’. Jacaylka aan Cantar iyo Cabla’ kuu geynini ma jacayl buu noqonayaa. Odeygeennii Feysal Cumar Mushteeg ahaa waa ka ushii galoolka ahayd iyo labadii go’ ee cadcaddaa qaatay. Oo markanna muxuu yidhi? Ku-ye:
“Meeshii Cantar geela soo mariyiyo,
‘Mid-way’ baan murti kaaga tiriyaa,”
Maalmihii uu Qaahira ku sugnaa ayuu boholyowga awgii soo xusuustay jacaylladiisii. Ereyo ammaan ah u tiri ayuu is-yidhi. Wuxu door-biday quruxdii Qaahira taallay in uu ugu soo hal-qabsado, ka dibna wuxu yidhi:
“Saamiya quruxdii adaa ka sitoo,
Sabaaxna waad ka qaadday sowdkiiyoo,
Sidoodiina waad u socotaa,”
Saamiya waxay ka mid ahayd xiddigihii filimmada halka ay Sabaaxna heesaa ka ahayd.
Ilaa 1967kii wuxu ku jiray macallinimadii. Markaa ka dib ayuu raacay mowjadihii dadka ahaa ee xilliyadaa dalalka Khaliijka u tacabbiri jiray, waxaanu waqti badan ku qaatay dalka Sucuudiga.oo buyuuddan (midhahan) aynu kor ku soo dhaafnay intooda badan uu ka soo tiriyay. Ku-sinnaan 1973kii ilaa 1988kii wuxu ku maqnaa dhoof iyo qurbaha hadba meel uu joogayba.
Fanka Feysal Cumar Mushteeg waxa ka mid ahaa sidii la yaabka lahayd ee uu yaqaannay afafka. Ilaa maalintan uu dhimanayo af Jarmalka si fiican ayuu ugu hadli jiray. Baashe iyo xaaskiisa Hibo Maxamed oo Jarmalka deggan ayaa maalin la kulmay. Af Jarmal ayay isaga kaga wada-hadleen. Oo ma Feysal baa la dagayaa. Waa ku qabsaday ee sheekadii ku darsaday, yaab inta Ilaahay labadoodiiba u keenay ayay qosol jaanta wadheen.
Mararka uu lahjadaha carbeed ku hadlayo marba seeb ayuu u roganayaa. Gobollada Sucuudiga marba mid ayuu ku geynayaa. Mar khaliijka inta uu kula tago ayuu hadba Imaarad kula tegayaa oo lahjaddoodii ku hadlayaa. Mar danbe ayuu xaggaa iyo Kuweyt kuu la dhaqaaqayaa ku odhanayaa: “Eesh loonak.” (iska warran). Feysal mar kale ayuu xaggaa iyo Ciraaq kuu la dhaqaaqayaa oo ‘Abi Nuwaas’ iyo hal-abuurradii caan-baxay kaaga sheekaynayaa. Wuxu odhan jiray iyaguna waxay isku salaamaan: “Shucluunkum” ama “Shixwaalkum.” Xaggaa iyo Masar haddii uu kuula kaco, xaafadaha Qaahira lahjadahooda ayuu kaaga sheekaynayaa, markaasaad ku hafanaysaa suuqyada uu ku mariynayo. “Ramsiis” iyo ayaanu afkaa ka dhigi jirin.
Mararka qaarkood inta uu kula ambadaa ayuu xaggan iyo Afrika kuula soo kacayaa oo ku keenayaa Soodaan. Wuxu kuu marinayaa mahadhooyinkii ka soo maray iyo sidii ay foodda isu dareen fannaankii weynaa ee caanka ahaa ee Maxamed Wardi oo ay fan-wadaag iyo saaxiibaba ahaayeen. Masraxyadii caan-baxay ayaa la iska helayaa. Waa masraxyadii “Qowmiga” iyo “Waddaniga”. Maxamed Wardi ayaa ku dhufanaya: “Ya Binta Niilil gamar, booba caleyk.” Oo mee ninkii Feysal Cumar Mushteeg! Waa ka isku laba rogaya ee xaafadihii Hargeysa midba qurux la quudhi waayay ka soo qaadanaya. Oo xaafadahaasi kuwee ayay ahaayeen? Wuxu soo qaadanayaa kuwii beryahaa ugu magaca dheeraa: Beeraha, Daantaa, Laba Nuux iyo qaar kaleba. Meel walba wuxu sheegayaa inta u joogta: “Ithneyn, Talaata” iyo tirooyin. Mar alle yaale markaa uu tirada dhammeeyo ayuu masraxa isku laba-rogaa. Ku-ye: “Inanta diibka, timaa ku duubtay, dayax la mooddaan, doonayaa.” Qofkii joogay wuu joogay e’ ma cid baa ku wada-hadashayba.
Waxa jiray qaybo fanka ka mid ah oo aanay Feysal Cumar Mushteeg cid Soomaaliyeed la wadaagin jirin. Miyuu sacab idiin tumay iyada oo la heesayo? Miyaad aragteen isaga oo heesaya oo sacabka tumanaya? Waxa ka darnaa codadka kala duwan ee uu afkiisa oo qudha ka samayn jiray. Mararka uu heesayo ayuu afka neef ka buuxin jiray. Ka dib inta uu neeftaa soo daayo ayuu afka oo uu kala qaaday labada sacab afka hortiisa ka tumi jiray isaga oo sacabku isku dhacayo marka uu afka kala qaado. Boodaantii xooluhu in ay yeedhayso iyo in kale ma aad kala garanayn. Qofka aan madasha caynkaas ah joogini wuxu ku dawakhayaa qalabka la tumayaa wuxu yahay. Feysal ayuun baa sidaa yeeli kari jiray. Cid kale ma yeeli kari jirin. Suulkiisii iyo saxeexiisii ayuu kaga tegay
Waxa kale oo la yaab lahaa codadkii iyo dhawaaqyadii kale ee uu afkiisa ka samayn jiray inta la heesayo ama uu isaguba heesayo. Miyaad u soo joogteen taas. Bal xusuusta Feysal Cumar Mushteeg oo heesaya ama fadhiya meel lagu heesayo. Mise cimriga iyo nasiibkuba idin kuma simin. Wuxu hal-hays u lahaan jiray isaga oo qoslaya in uu sameeyo sanqadhaha ay ka midka ahaayeen: “ishkish….ishkish.” marka uu cabbaar wado ayuu ku soo jari jiray: “Heelle” ama “Hoobbo.’
Ab iyo isirkooda garanaayoo,
Miyuu badahaa jacaylku weli idin la maray! Haddaa maxaad isla waalaysaan waxba ma aydin arag e’.
Waa kan mar kale, waana sannadihii loo beddelay Bari. Wuxu ku sugan yahay magaalada Buraan ee gobolka Sanaag oo buuraley dhexdeed ku taal. Wuu cabanayaa, ku-ye:
Buraan ma badday ku taallaa,”
Maalmo aanu wada fadhiisan jirnay bilowgii sagaashankii ayuu iiga sheekeeyay. Ka dib markii ay intaa maqleen ayay reer Buraan xanaaqeen. Waa kuwa isu tegay ee bahal casuumad ah u diyaariyay. Wuxu ii sheegay in maalintaana beydkan soo socdaa ka soo go’ay:
“Buurahan Jinni baysku baahinayee,
Ku-ye buurahan baas ayaan Buraan kharribaya e’, xataa Hargeysa ayaa muuqan lahayd.
Haddana waa ka xaggan iyo jacaylka laftiisii inoo la kacay. Awal si dadban ayuu abbaarayay e’, hadda waa kan dhuunta ku dhuftay. Ku-ye:
“Jacayl ma ba’oo ma baabba’a oo,
Waa laga bogsadaana waa been,”
Ballanka Ilaahay Cabdi Iidaan Faarax ayaa is-na bartaa ag dhigay, markii uu lahaa:
“Jacayl biri ma goysoo,
Biyo kaama maydhaan,”
Saa waa hal-abuurka laxan-dhaadhiga ah ee Cali Sugulle Dun-carbeed markii uu jacaylka ka hadlayay ee uu wiilku lahaa:
Dab baxaaya oo belelee,”
Ee gabadhuna kaga rogaysay:
Bidhaan quruxsan ood u bogtee,”
Axmed Libaaxna naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’ heestiisa Axmed Mooge Liibaan qaado ee ‘dad haddaad is-qabataan’, jacaylka sidan ayuu u tilmaamayaa:
“Dab ku hura jalleecada,
Oo ka beerma daymada,
Deddo iyo xanuun iyo,
In uu cudur da’ weyn yahay,”
Haddii aynu intaa nidhi aynu ku noqonno gaaxdii Feysal Cumar Mushteeg ee Busi inoo soo gudbiyay iyo ‘Ba’leydii’ uu ku lahaa Qaraamkii. Markanna wuxu ka hadlayaa sidii ay isku seegeen madaxdiisii Ingiriiska ahayd ee jacaylka la garan weyday, waxaanu yidhi:
“’Parkerba’ waannagii ku kala boodnee,
Haddaan lay beddelin bishaa dabadeed,
‘Badenow’ tanna waan ka baxayaa,”
Halkanna waxaynu kaga baxaynaa ‘Ba’leydii’ Feysal Cumar Mushteeg wixii aanu ka haynay.
Waa qormo kale oo Qaraamigii ah. Weli gaaxdii Feysal Cumar Mushteeg ayaynu maalaynaa. Waxaynu gallay Ca’dii iyo wixii uu ka yidhi. Oo muxuu ku bilaabay:
“Ilaaha nin caydh ah cuud siiyow,
Nin cudur qaba caafimaad siiyow,
Cidhiidhi nin ku jira Allaha caawiyow,
Ka aan cidi arag caynka uu egyow,
Caaniyo nabad iigu soo celi,”
Subxaan! Bal siduu u sifeeyay awoodaha Ilaahay ee uu markii danbena gacmaha u hoorsaday eega.
Waa kan haddana mar kale inoola ambo-baxay Boorame iyo kalgacalkiisii guunka ahaa. Oo markanna muxuu yidhi:
“Canbayow waxaan haadda kaa celiyaba,
Waxaan sida Cawsha kuugu ciyaba,
Cadceed-u-eg caynka loo cawariyo,
Canbaha haadku cunayba waa calaf,”
Waa kan mar kale Feysal Cumar Mushteeg oo jacaylkii ku laxaadsaday ee laba-dibleeyay sababaynayaa, waxaanu intaa hore ku kabay:
“Cusbiyo kama maarmo geelu carroo,
Cirkiyo wuu ogyay halkii cosob loo,
Ceeb maaha in aan ku caashaqee,
Cidliyo ha iigu tuurin ciirsi la’,”
Bari iyo beryihii loo beddelay ee dhowr iyo lixdankii ayuu beydkanna Ceel-af-weyn ku odhanayaa:
“Ciyaartaan bartay iyo casrigii ka imee,
Ceel-af-weyn caano geel ma yaallaan?”
Waxa kale oo buyuuddiisii Qaraamiga ka mid ah:
“Ciilkayga kola caashaq deyn maayoo,
Ciyaarta cid kale la garan maayee,
Carsaanyo sigaarka hayla cabtee,
Ciiddiyo badda cagaha ii dhiga,”
Bal ka warrama marka uu kalgacalku kugu qasbo in aad badda iyo carsaanyada jamato. Weli isaga oo aan ka dhammaan mowduucii kalgacalka, wuxu haddana yidhi:
“Carsaanyoy baddii ka soo carartee,
Caagtaye ma cidlaad lugaysaa,”
Waa kaa carsaanyo la sheekaystay ninkii Feysal Cumar Mushteeg. Beydkan ugu danbeeya inta aan ka hayo intii uu ‘Ca’da’ ka falkiyay, wuxu odhanayaa:
“Cagaha socodkii ciddidii madhatoo,
Malaha cidhibtana cad kuma yaal”
Bishii Jeeniweri, 1998kii ayuu maalin aanu Hargeysa Club joognay Dararamle beydkan ku qaaday codka Qaraamiga ah ee ‘Caweys” oo uu Cabdillaahi Qarshe lahaa. Midhaha kale ee ‘Caweys’ lagu qaado Xuseen Aw Faarax Dubbad ayaa lahaa, waxaana ka mid ahaa oo aan maalintaa dhegaystay:
“Boggayga cadhadii cagaar ka baxyoo,
Dushaydu caleen ma leedahayeey,
Waxaan calashaaba waa caday oo,
Cunahaa waxba ii ma dhaafaan,
Iyo beydkan cajiibka ah:
“Sidii Cantar iyo Cablaynu nahee,
Miyaynu kala caajisaynaa,”
Ma cod iyo ayaad moodaysaan ‘Caweys”! Waa cod farxadeed oo kalgacal. Waa wixii la isugu heesi jiray habeen afar iyo tobnaad ah oo suxullada la mutay burciid daad maray oo cad oo weli rayskii ka sii qoyan yahay.
Waxaynu hore ugu sii soconaynaa qoraalka tuducyadii Qaraamiga ahaa ee Feysal Cumar Mushteeg curiyay. Maa daama aynu xaraf xaraf u raacaynay, qormadan waxaynu ku gelaynaa qaybihii uu ka falkiyay xarafka ‘Da’ sidii uu inoogu soo tebiyay Maxamed Maxamuud Cige oo loo yaqaanno Busi, Ilaahay ha ka abaal-mariyo isaga iyo inta ummadda wax u keydisa ee is-xilqaantaba e’.
Wuxu ku bilaabayaa:
“Kii diray aniguu I doonaayoo,
Doqon baan garan hadalka loo dul-maree,
Tan iyo deyrta waan ka dabo-tegi,”
Garo’ oo jacalkiisii ayaa isaga oo aan ogeyn laga diray, sida ka muuqata tuducan. Calaacalkii ayuu sii wada uu kaga cabanayay jacaylkiisa laga kaxeeyay, waxaanu intaa hore ku kabayaa:
“Diyaarad ka saare degelkeennoo,
Daqiiqad Cadan bay dul taagneydoo,
Duhurkii Qaahiray ka sii duushoo,
Dawaafshe Rooma dacalladeediiyoo,
Ku dege Ingiriis dalkiisii,”
Wuxu ku sii darayaa:
“Hashaydaan daajiyaba nin iga didiyiyo,
Miyaanan dibindaabyo waayeyn,”
Waxa kale oo uu ku sii kabayaa:
“Nafyahay daashay aan ku daaddihiyee,
Ha ka didin wixii dantaada ah,”
Naftiisii ayuu u caqli-celinayaa, isaga oo leh:
“Nafyahay doqontii adays dilayee,
Duhurkii waxaad haysatood dejisiyo,
Doon-doonka habeenki kala daa,”
Beydkanna wuxu ka mid yahay kuwa aynu ugu maqalka badan nahay Qaraamiga innaga oo aan garayn ciddii tirisay, run ahaantiina Feysal Cumar Mushteeg ayaa ku saxeexan, waxaanu yidhi:
“Dakharkii cishqigaa I dooganayoo,
Dareemayoo waan damqanayaa,”
Beydkan qudhiisu kama dhaco, waxaanu yidhi:
“Dawee qalbigaa I daxalaystoo,
Hadalkaa I damqaaya iga daa,”
Bal hadda aynu eegno jacaylkiisii wuxu uga dhignaa, waxaanu yidhi:
“Daway ii ahayd an doonaayoo,
Dugsay ii ahayd I diirinayoo,
Naftayday daranyada u diidi jirtee,
Anigaa doqonoo mid kale ku daree,
Dabayshu hayga dhaafto dacallada,”
Markanna Feysal Cumar Mushteeg wuxu ka cabanayaa intii is-jecel dadka isku dira, waxaanu leeyahay:
“Haddii lagu dilo anaa damqado,
Laysuma daayo laba is-doonaysoo,
Dadkeennu waxyeelladuu door-bidee,
Ku doortaye may ku daayaan,”
Isaga oo naftiisa ka hadlayana, intaa hore wuxu raaciyay:
“Hadday doqon kuu hagoogeen,
Direys u xidheen dib ii eeg,”
Beryihii ay dal-tabyadu daashatay ee uu ku noolaa dalkaa Sucuudigana buyuudda laga hayo wax aka mid ah:
“Dammaam iyo Khobar ma doonayo oo,
Dookhaygu dalkan wuu la garan waayee,
Aan duulee diyaarad ila doon,”
Weli waxaynu joognaa qurbihii. Waa kan mar kale Feysal Cumar Mushteeg, waxaanu yidhi:
“Naf yahay daashay aan ku daaddihiyee,
Dimishiq ma ku maray dawaafkii,”
Waa mar kale iyo arrintii isku-dirka dadka is-jecel, waxaanu yidhi:
“Dareemay in laysku keen dirayoo,
La kala dilay daacaddeennii,”
Markanna waa habeen uu ku sigtay in aabbaheed dilo, waxaanu yidhi:
“Dharkana kama dilin dawaarluhuyoo,
Diricay gashataan I deyneyn,”
Kol ay digo tahay dubaabku ka tegay,
Nafiba naftay doonto waw dawee,
I daaya maxaygu kiin diray,”
Anigaa doortay deynna kari maayee,
I daaya maxaygu kiin diray,
Xarafka ‘Fada’ waxaanu ka hellay beydkan oo keliya:
“Kaliishoo fogaatay fore dhacaa,
Faniyay araggaaga lagu farax,”
Bal hadda aynu u gudubno xarafka’Ta’da’ iyo inta laga hayo, ama Busi ka qorayba habeenkaas, waxaana ka mid ah:
“Tilmaanta yartaan Tufaax ku masleed,
Timaha moodid naagihii Turkiga,
Aayar uun ka tag waa tu’ igu adage,
Tashadoo hadal wuxu isugu tegay,
In aan shaqadaba iskaga tago,”
Waa kan haddana isaga oo jacaylkiisii la hadlaya:
“Tufaaxay haddaad carrada ka tagtood,
Badaha ka tallowdo ta ugu dheer,
Tawaawac iyo taah la ledi maayee,
‘Tip-top’ kolley toob ka sii tolo,”
Sadarkaa ugu danbeeya ayaa tilmaamaya ilbaxnimadii iyo reer magaalonimadii Feysal Cumar Mushteeg, Ilaahay naxariistii Janno ha ka waraabiyo e’.
Immikana wuxu ka calaacalayaa siday naftu uga dakaatay ee uu ku seegay cibaadadii iyo salaaddii ku waajibtay, waxaanu yidhi:
“Markaan ku tashado in aan tukadaba,
Waxaanay tamartaydu taabayn iyo,
Tumashay naftu ii tilmaantaa,”
Bal immikana aan u tallowno buyuudda uu ka tidcay ama ka soohayba xarafka ‘Gada’, waxaanu ku bilaabayaa:
“Is-gabay waxna guursan kari maayee,
Meel baa I go’aysa goortaan arkee,
An geeriyoodee hay hor geynina,”
Gargoorkii ku yaallay Geed-deebliyo,
Gal-saxar mar labaad ma gaadhnaa,”
Wuxu ka mid yahay beydadka ugu caansan Qaraamiga ee aynu inta badan dhegaysanno.
Aynu u digo-roganno xarafka ‘Wa’da’ iyo intii Feysal Cumar Mushteeg ka yidhi. Wuxu ku bilaabayaa buyuuddan uu ku xusayo saaxiibkii Maxamed Wardi, fannaankii weynaa ee Soodaaniga ahaa, waxaanu yidhi:
“Aniga Wardi baa I waalaayoo,
Waadigii cishqigaa I walwaalanayee,
Waxaan qabo mayga werisaan,”
Haddana waa kan waddadii Bari u baaqaaya ee leh:
“Waddada bariyeey ku weheshaday,
Wiigganba War-idaad baan dul weehanayee,
Tanina ma Wadaamo-goo baa,”
Wardi aynu ku noqonno:
“Haddaan wed I dilin wiiggaa dabadeed,
Sidii Wardi baan u wadayaa,”
Waxa kale oo buyuuddan ka mid ah, tuducyada caan-baxay ee ay ka midka yihiin:
“Markaan weynahay ku waafajinayn,
Waddada toosan waad ka weecan ogtoo,
Wadiiqad martaa wedkaaga ah,”
Wuxu ku darayaa:
“Waagii ii beryaba wareer ii kordhiyo,
Miyaanan wax I waala waayayn,”
Bal hadda beydkan u fiirsada sawirka uu bixinayo:
“Waan weydoobay kuu war noqon meysee,
Sidayda ma waalan gaadheen,”
Beydkanna wuu ku calaacalayaa:
“Wakiil adaga iyo waqtaan waayee,
Wanaagsan igamay wareegteen,”
Markanna waa xanuunka kalgacalka iyo laxawga, ku-ye:
“Wadniyo sanbab wada shaqaynaayoo,
Mid wiiqmay xanuun ma waayaan,”
Mar uu jacaylkiisa u barooran gaadhayna wuxu yidhi:
“Wehelo waayadaa war kama helinee,
Ma weertay siduu waalidkay go’ay,”
Markanna wuxu u digo-roganayaa xarafka ‘Ha’da’, waxaanu ku bilaabayaa:
“Nin tiisii helaa heblaayda hayee,
Aniga hawshu wey halkeedii,”
Isaga oo naftiisa la hadlayayna, wuxu yidhi:
“Naf yahay heedaddowday aan ku hagee,
Hargeysa ma joogtid hoygiiyee,
Waa in aad keligaa hadaaftaa,
Waa maalmihii dul-saarka ku ahaa ee uu qurbaha ku sugnaa. Habeen ayuu arkay isaga oo Hilton ku cawaynaya, ku-ye:
“Habeenba hir baan ka heesaayee,
Caawana Hiltankii hawaarsaday,”
Mar uu naftiisa la hadlayayna wuxu yidhi:
“Naf yahay haybisaa had iyo goor,
Markay hor timaaddana hogataa,
Haddaanad hadal kula hagaagayn,
In aad ka hadhaa habboonayd,”
Ammaantii kalgacalkiisa wuxu ka yidhi:
“Timaha halaqeed haldhaa mooddiyo,
Haybadda wejigee hiddo-u-dhaladka ah,
Hub-qaadkeedu hibasho igu reeb,”
Wuxu intaa raacinayaa:
“Habsaamay intaan u heesaayoo,
Harraaday intaan heblaayda hayee,
Hirdaayaye maan iskaga hadho,”
Weli waxaynu dhex maaxaynnaa badihii kalgacalka ee Feysal Cumar Mushteeg dhex muquuranayay, waxaanu mar kale yidhi:
“Heddaydii gacantaan ku haystaayoo,
Hadhkaagay naftaydu hoos taal,”
Isaga oo tilmaamaya meel hoo u baahan in aan hadal wax ka tarin, wuxu yidhi:
“Haddii geel harraday haro yimid,
Aseen biyo haqab-la’ loo hayn,
Hoobaydu ma harraad tiraysaa,”
Maalmihii uu gobollada Bari ee Soomaaliyadii hore joogayna, wuxu ku cawday:
“Huudhi bay dhex yaal Baddii Hurdiyoo,
Halkiyo Calawlaan ka soo hinqadee,
Hargeysa maxaad ku haysaan,”
Aynu u gudubno xarafka “Ja’da”, waxaanu ku bilaabayaa wax aka haysta jacaylka iyo Jubayl oo uu malahayga beryahaa deggenaa::
“Jidhkaygu naarti Jahannaba iyo,
Jaxiima ku noqoy jidhkaygiiyoo,
Jubayl baan jiibta kaaga tiriyaa,”
Xaaladdii nololeed ee uu ku jiray, wuxu yidhi:
“Waxaan ahay joogahaa maqanoo,
Waxaan ahay jiif nin loo diidoo,
Waxaan ahay ruux la kala jarayoo,
Jabuutiyo Jowhar kala jira,”
Aynu bilowno immikana intii uu ka yidhi xarafka ‘Sa’da’, waxaanu ka bilaabayaa buyuuddii uu Qaahira ka tiriyay beryihii uu miyuusigga ka baranayay, waxaanu yidhi:
Sabaaxna waad ka qaadday sawdkiiyoo,
Waa Saamiya oo jilaa ahayd iyo Sabaax oo heesi jirtay. Waxay ahaayeen calan-sidayaashii xiddigihii Masaarida ee xilligaas. Waxa kale oo aan sii xusuustaa Faatin Xamaama.
Bal immikana aan eegno sida u sawiri lahaa haddii ay ciyaarayso, waxaanu yidhi:
“Sinnikhso sida awr la seeteeyoo,
Sinaha hadba gees u kala saar,”
Ma quruxdeedu sida ay u saamaysaa, wuxu ka yidhi:
“Subxaane Ilaaha taa sawiree,
Sameeyaa sabab iiga soo dhigay,”
“Ma seexdoo habeenkii waan selelaa,
Sayida waa la ii sawirayaa,
Maaqnaanshaheeda sida uu u dareemo, wuxu ka yidhi:
“Salaadda mid aan u seegaayoo,
Saaxiibkayow noo xidhnayd siri baa,
Sawaxankeedii ii sanqadhayaa,”
Mar kalena wuxu yidhi:
“Salaanina waa sedee Seynabeey,
Sidaasi miyay I qabataa,
Kolla caawa seexan kari maayee,
Siraadkii saliid ma leeyahay,”
Bal hadda immikana aan eegno xarafka ‘Ka’da’ inta kooban ee uu ka yidhi aan eegno:
“Immikay soo kartooy u kulushahayoo,
Kiiloo Batra kooras loo diray,”
Hadda wuxu sheegayaa waa ‘Cleoptra’, waana curisyada aqoontu ku soo kordhisay Qaraamiga.
Waxa kale oo uu yidhi:
“Kaskayga kolkii waxaan is-idh iyo,
Kurtinyahow waxaad noqotay kala kaan,”
Waxa kale oo uu ku darayaa:
“Kalgacalkaaga kow u odhan maayee,
Ha I keliyaynine igu kalsoonow,”
Xarafka ‘La’da wuxu ku bilaabayaa:
“Labadan cishaan ladnaan ku ledee,
Leylina ma la timid lurkeedii,”
Xarafka ‘Na’da oo uu waxoogaa ka yidhina bal aan eegno:
“Naf weyday naruuradeediiyoo,
Naafowday maxay ku nooshahay,”
Hadday naftu weyday tii nasin layd,
Waan nacay noloshii adduunyada,”
Naafowday hadday ku weydo naftuye,
Noolow anna way nasiib-xumo,
Nadarka indhahayga nuurkeedaay,
Naciimal-caadifeey ma nabad baa,”
Xarafka ‘Sha’du sidaa uma badna, waxaanu ku bilaabayaa sida aan qoraalkan ‘Busi’ ka soo xigto, wuxu ku bilaabayaa:
“Shaqadii baa I geysay shaanshaanee,
Tollay Shamis sheekadeedii,
Haddii shaab magaalo laga furo,
Shay buu nin waliba ka qaataaye,
Hablaha Shamis baan ku leeyahay,
Bal aynu immikana u guurno xarafka ‘Qa’da oo ku bilaabayo buyuuddii uu bariga ka tiriyay, waxaanu yidhi:
“Qardhiyo Laaso-bari roobkii ku qubtaay,
Waxaan u qushuucay quruxdaadoo,
Qacdaan ku arkaan is-qoonsadayoo,
Bal qabsoo waaban kuu qandhays nahay,”
Bal hadda aynu u fiirsanno sida aanu jacaylkiisii u qiimayn hadalladii uu ku lahaa, waxaanu yidhi:
“Intaan qubay hadallo qaaliya,
Qasaariyay waa quruuruxa,”
“Qunbacay qalbigii I qoonnaayoo,
Qandhadoo waaban wada qadhqadhayaa,”
“Malaha qalbigaagu wuu qallaloo,
Qudhaydan baxaysa qaban meyside,
Qaaddirkaan u qayshan doonaa,”
Markanna waa beryihii uu ka cabanayay bariga waxaanu yidhi isaga Gebilay xusuusanaya:
Ma haddaan galay qaaba-qowseyn,”
Bal hadda immikana aan eegno sida uu kalgacalkiisii u ammaanayo, waxaanu yidhi:
“Qod baad tahay meel qabow ka baxoo,
Ubaxu dhaaxo aad u wada qariyoo,
Feysal Cumar Mushteeg ma in laga dhammaanayo ayaad moodaysaan. Wuxu curiyay maanso bad ah oo aynaan ka geyoonayn. Bal hadda immikana aan u gudubno xarafka ‘Ma’da ah iyo wixii uu ka tidcay ereyo xariira oo ma-hadho iyo dhabanno-haysba reebay. Wuxu ku bilaabayaa:
“Magane waxaad tahay marwada dumarkoo,
Milgaha hadalkaad u odhanaysiyo,
Miyirka socodkaad mushaaxaysiyo,
Maraaraa luquntiyo dhexdaa madagta ah,
Midigtaad saydhay baw markhaatiya,”
Waah…Waah! Waxaasaa jacayl la yidhaahdaa. Allow ma ammaan! Bal adba! Intaa wuxu ku darayaa:
“Maroodi ma daayo mirashada,
Meyracaan u bartaan muhanayaa,”
Waa kaa u tallaabay in uu ka sheekeeyo Cilmi-boodhari, waxaanu yidhi:
“Miskiinkii Cilmi murugadii ku tegyoo,
Waxaaban u malaynayaa ma hubee,
In uu weli muusannaabaa,”
Haddana waa kan u tallaabay Qays iyo Leyla iyo mashaqadii soo martay, waxaanu yidhi:
“Maqashay Leyli Qays waxay marisoo,
Adoo miyir qaba maqnaan meyside,
Magooleey anaad I madiyeysee,
Mar uun baad adiguna muxtaaj noqon,”
← Sarkaal iyo saaxiib kal-furraa: Siciid Cali Giir
Maxamed Saleebaan Tubeec: Erey sagootis ah →